राष्ट्रियसभा : ‘अरु हरुवा हुने वामदेव किन नहुने ?’ यसअघि नेकपाले ककसलाई बनायो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more राष्ट्रियसभा : ‘अरु हरुवा हुने वामदेव किन नहुने ?’ यसअघि नेकपाले ककसलाई बनायो ?
फागुन १५ गते, २०७६ - १३:३३
काठमाडौं । चुनावमा पराजित भएका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनाइएकोमा व्यापक आपत्ति जनाएको नेकपाभित्रको ओली समुहले यसअघि गौतमजस्तै पराजित भएकाहरुलाई राष्ट्रिय सभामा निर्बाचित गरेको पाइएको छ ।
माघ ९ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट पहिलो कार्यकाल सकिएका कुल १९ राष्ट्रियसभा सदस्य माध्ये १८ सदस्य निर्वाचन भइसकेका छन्। बाँकी एक सदस्य नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य हुन्। उनको कार्यकाल आगामी फागुन २० मा सकिँदै छ।
नेकपाका एक नेताले खबरडबलीसँग कुरा गर्दै भने, –‘अरु हरुवा हुने वामदेव किन नहुने ?’ उनको आरोप थियो –प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मान्छेहरुलाई जे पनि गर्ने तर अरुलाई नगर्ने गरेका छन् ।
बुधबार दिउँसो बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने उक्त एक सदस्यका लागि उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर ओली निकट नेताहरुले निर्वचनमा पराजित नेतालाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको बुझिएको छ। गौतम २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाको क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भएका थिए। २०७५ असोजमा वामदेव काठमाडौं ७ बाट चुनावी मैदानमा उत्रिने चर्चा चले पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन।
उपाध्यक्ष गौतम बाहेक संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव हारेका केही नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा बनाएका छन्। चुनाव हारेका ओलीका खास मान्छे झापाका देवेन्द्र दाहाल प्रदेश एकबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन्। गण्डकी प्रदेशबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा उम्मेदावर बनेका छन्। उनी गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट पराजित भएका थिए।
प्रदेश ५ बाट अपांगता कोटामा राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका जगप्रसाद शर्मा पनि प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दाङ–३ ‘क’ पराजित भएका थिए। कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसँग उनी पराजित भएका थिए। त्यस्तै तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भगवती न्यौपानेलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेकी छन्। उनी मेयरमा कांग्रेस उम्मेदवार उदयराज गौलीसँग पराजित भएकी थिइन्।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाको मेयरमा पराजित विमला घिमिरेलाई प्रदेश ५ बाट उम्मेदावर बनेकी छन्। ‘चुनाव हारेका ओलीका खास मान्छेलाई राष्ट्रियसभामा लैजान हुने तर अहिले वामदेवलाई लग्नु हुन्न भनेको सुहाएन कि रु गम्भीर प्रश्न,’ नेकपाका एक नेताले भने।
फागुन १५ गते, २०७६ - १३:३३ मा प्रकाशित